निर्मलाको ज्यान गएको आज दुई वर्ष पुग्यो, तर अझै उघ्रि एन पर्दा ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /News/निर्मलाको ज्यान गएको आज दुई वर्ष पुग्यो, तर अझै उघ्रि एन पर्दा !
निर्मला पन्तको ब`लात्का-रपछि ह`त्या भएको शनिबार दुई वर्ष पुगेको छ। निर्मलाका ह-त्यारा पत्ता लगाउन सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठ्यो। सायदै सबैभन्दा बढी छानबिन समिति गठन गरेर अनुसन्धान भए। तर दुई वर्षसम्म घटना रहस्यमै छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
घटनाको दुई वर्षसम्म ह-त्यारा पत्ता नला`गेपछि निर्म`लाका आमाबुवाले न्याय पाउने आश गुमेको बताएका छन्। ‘छोरीको ह`त्या भएको पनि दुई वर्ष पुगिसक्यो,’ निर्मलाकी आमा दुर्गादेवीले भनिन्, ‘अझै न्याय पाउन सकि`एको छैन।’ निर्म`लाको न्यायका लागि देश दुनियाँ लडेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘न्यायका लागि सबैले आवाज उठाए तर पनि प्रहरीले अ`पराधी लाई समात्न सकेन।’
प्रहरीले सिआइबीसमेत गरी विभिन्न छानबिन समिति बनाएर अनुस`न्धान गरे पनि ह-त्यारा को हो भन्न टुंगो लगाउन अझै सकेको छैन। सुदूरपश्चिम प्रहरी प्रमुख उत्तम सुवेदीले विभिन्न पाटा र कोणबाट अनुसन्धान जारी राखेको बताए। ‘हामी अनु`सन्धानकै क्र`ममा छौं,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म दोषी को हो भन्ने टुंगोमा पुग्न सकेका छैनौं। सबै उपाय अपनाएर तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन प्रयत्नरत छौँ।’ यो धेरै गिजोलिएको केस भएकाले अनुसन्धान जटिल भएको उनको भनाइ छ।
प्रहरीले निर्मलाको सुरुवाल पखालेको, लुगा जलाएर नष्ट गरेको, घ`टनास्थल सिल नगरी प्रमाण नष्ट हुन दिएको, फिंगर र फुट प्रिन्ट संकलन नगरेको, तालिमप्राप्त कुकुर परिचालन नगरेको कारण दोषी पत्ता लगाउने बलियो प्रमाण बाँकी छैन। एकमात्र आधार मानिएको निर्मलाको भेजिनल स्वाब पनि त्रुटिपूर्ण रहेको भनिएपछि दोषी पत्ता लगाउने ठोस प्रमाण खोज्न जटिल छ।